ကျွန်ုပ်၏ PC သည် Kindle ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ၊ အဖြေကိုရှာဖွေပါ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
ဒန်နီရယ် Terrasa | 27/09/2021 15:00 | အင်တာနက်ကို
အားလုံးအဘို့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များ ကမ္ဘာကြီးကိုလှည့်ပတ် Kindle ခွဲလို့မရတဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံး e-book reader သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဖျော်ဖြေရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သင်ယူမှုများစွာကိုနာရီပေါင်းများစွာပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့လည်းငါတို့ကအဲဒါကိုငါတို့တွေ့တဲ့အခါငါတို့လိုမျိုးအခြားပြသနာတွေရှိတယ် PC သည် Kindle ကိုမမှတ်မိပါ။
၂၀၀၇ မှာစတင်ထုတ်လုပ်ကတည်းက Amazon Kindle ၎င်းသည်နောက်လိုက်များရရှိခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မွမ်းမံခြင်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင်တိုးတက်မှုများထည့်သွင်းခြင်းတို့ကိုမရပ်တန့်ခဲ့ပါ။ ၂၀၁၉ တွင်တင်ပြခဲ့သောနောက်ဆုံးဗားရှင်းသည်၎င်းမှဖြစ်သည် Kindle အိုအေစစ် 3မရ။ အခြားအသစ်အဆန်းများအကြားတွင်ဤပုံစံသည်နံရံကပ်များတွင်နွေးထွေးသောအလင်းကိုပထမဆုံးထည့်သွင်းသည်။ စာဖတ်ခြင်းကိုမျက်လုံးပေါ်လွယ်လွယ်နှင့်လွယ်ကူစေရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခု။
သင်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ချိတ်ဆက်ရန်အဘယ်ကြောင့်အခါအားလျော်စွာအကြောင်းရင်းများစွာရှိသည် e-reader ကွန်ပျူတာသို့ ဥပမာအားဖြင့်စာဖတ်သူအားစာအုပ်အသစ်များတင်ရန်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသင်စာအုပ်များအဖြစ်သို့ပြောင်းရန်လိုသည် .mobi ပုံစံ၎င်းသည် Kindle အသုံးပြုသောအရာဖြစ်သည်။ ဤပြောင်းလဲခြင်းသည်အချို့သောအစီအစဉ်များကဲ့သို့ကျေးဇူးပြုသည် caliber အခြားသူများ ၎င်းကိုသုံးရန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလိုသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့် PC သည် Kindle ကိုအသိအမှတ်မပြုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရသောပြသနာရှိသည်။ မင်းရဲ့ကွန်ပျူတာမှာသိမ်းထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုမဖတ်နိုင်လို့မင်းကိုယ်မင်းနုတ်ထွက်သင့်လား။ နည်းလမ်းမရှိ။ ဖြေရှင်းနည်းတွေရှိတယ်၊ အဲဒါတွေကိုငါတို့ဒီ post မှာရှင်းပြမယ်။
1 PC-Kindle ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ ဖြေရှင်းချက် ၆ ခု
1.1 အခြား USB port တစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ
1.2 USB ထိန်းချုပ်မှုများကိုဖယ်ရှားပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ
1.3 USB selective suspend ကိုပိတ်ပါ
1.4 Kindle ကိုအပြည့်အဝပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ
1.6 Kindle Driver ကိုကွန်ပျူတာတွင် install လုပ်ပါ
PC-Kindle ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများ၊ ဖြေရှင်းချက် ၆ ခု
ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ USB drive mode icon သည် e-reader screen တွင်ပေါ်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် PC screen ပေါ်တွင်၎င်း၏ internal memory မှ file explorer ပွင့်လာသည်။ Kindle တွင်ကျွန်ုပ်တို့သိမ်းဆည်းထားသောစာအုပ်များသည်၎င်းတို့ပုံစံအမှန်သို့ပြောင်းပြီးနောက်စာအုပ်အသစ်များသိမ်းဆည်းမည့်နေရာပေါ်လာသည်။
အကယ်၍ ဤနည်းအတိုင်းမဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်သွယ်မှုပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒီမှာသင်ရှိသည် ၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်း ၆ ခုရှိသည်:
အခြား USB port တစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ
PC သည် Kindle ကိုမမှတ်မိပါ။ ပြဿနာသည် USB port နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်
အဲဒီလောက်ရိုးရှင်းပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်မကြာခဏအလုပ်လုပ်သည်။ အဲဒါaယူအက်​​စ်ဘီ ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်းသည်မကြာခဏဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောအရာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်မည်သို့သိသနည်း။ စစ်ဆေးရန်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းမှာစမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်စသဖြင့်အခြားမည်သည့်စက်ကိုမဆိုချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာက Kindle ကိုမအောင်မြင်ခဲ့ဘဲငါတို့က Kindle ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သောဆိပ်ကမ်း၌ဤစက်သစ်ကိုအလိုအလျောက်အသိအမှတ်ပြုလျှင်၎င်းသည် USB port ၏ပြသနာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
ဤကိစ္စတွင်ဖြေရှင်းချက်သည်သိသာသည်။ သင်၏ Kindle ကိုအခြား USB port များနှင့်စမ်းကြည့်ပါ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာပြသနာက Kindle ရဲ့ USB cable နဲ့ port ကြောင့်မဟုတ်ဘဲပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကေဘယ်ကြိုးပြတ်လျှင် Windows သည် device ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ဤအခြေအနေတွင်သင်သည်အခြားဆက်သွယ်မှုကေဘယ်များကို သုံး၍ ကြိုးစားနိုင်သည်။
Kindle ကိုအသိအမှတ်မပြုသော PC ကိုပြုပြင်ရန် USB ထိန်းချုပ်မှုများကိုဖယ်ရှားပြီးပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ။
USB ပြဿနာကိုမစွန့်ဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ PC နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle အကြားဆက်သွယ်မှုမရှိခြင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားရကျိုးနပ်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသေးသည်။ စိတ်ကူးတို့ပါဝင်သည် uninstall လုပ်ပြီး USB drivers တွေကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ပါမရ။ ၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ငါတို့နှိပ်တယ် Windows + R ခလုတ်များ ဖန်သားပြင်တွင်ပြသသောကွပ်မျက် ၀ င်းဒိုး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အမိန့်ကိုရေးသည် devmgmt.msc ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့နှိပ်သည် ရိုက်ထည့်ပါ
ထို့နောက်ကိရိယာမန်နေဂျာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုသို့သွားပါ "Universal Serial Bus Controllers"
ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စာရင်းရှိစက်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုကိုကလစ်နှိပ်ပါ၊ ထို့နောက်ကလစ်နှိပ်ပါ "ဖယ်ထုတ်ပါ" ။ စာရင်းထဲရှိစက်ပစ္စည်းတစ်ခုစီနှင့်တူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လုပ်သည်.
ဒီပြီးတာနဲ့ ငါတို့ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ပါ။ ဤသို့ဖြင့်ဆက်သွယ်မှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းသင့်သည်။
USB selective suspend ကိုပိတ်ပါ
USB ဖြင့်သွားနေဆဲဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများစွာသည်ဤနည်းလမ်းကိုအလွန်အသုံး ၀ င်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ USB selective suspend function ကိုပိတ်ထားပါ၊ controller သည်အခြား port များကိုမထိခိုက်ဘဲတစ် ဦး ချင်းဆိပ်ကမ်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်ခွင့်ပြုသောတူညီသည်။
မှတ်စုစာအုပ်ကွန်ပျူတာများတွင်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ထားသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ၎င်းသည်ပိုမိုသက်သာသောစွမ်းအင်ကိုရရှိစေပြီးဘက်ထရီကိုပိုမိုကြာရှည်ခံစေသည်။ အပြန်တွင် Windows နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle အကြားဆက်သွယ်မှုပြသနာများရှိသော်လည်းအလွန်အဆင်ပြေသည်။
USB selective suspend ကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှိပ်ပါ Windows ကို + R ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင် Run application ကို run ရန်
အဲဒီမှာငါတို့ရေးမယ် "ထိန်းချုပ်ရာနေရာ" ကိုနှိပ်ပါ ရိုက်ထည့်ပါ
လာမယ့်မီနူးတွင်ငါတို့ရွေးချယ်ပါ "ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်အသံ" အဲဒီမှာငါတို့ကလစ်တယ် "စွမ်းအင်ရွေးချယ်မှုများ" ။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာတွင်ပါ ၀ င်သောပါဝါအစီအစဉ်အားလုံးကိုပြသမည့် ၀ င်းဒိုးအသစ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်သည်။ သင်လုပ်ရန်မှာသင်သုံးသောတစ်ခုကိုရွေးပြီးကလစ်နှိပ်ပါ "အစီအစဉ်ဆက်တင်များကိုပြောင်းပါ။ "
ပြီးရင်ထပ်နှိပ်ပါ "အဆင့်မြင့်ပါဝါဆက်တင်များကိုပြောင်းပါ"ငါတို့ရှာသည် "USB ပုံစံသတ်မှတ်ခြင်း" ရွေးချယ်စရာများစာရင်းထဲတွင်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲဒီမှာငါတို့ကကလစ်နှိပ်ပါ "USB Selective Suspend ဆက်တင်များ" ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ငါတို့ကလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးအောင်လုပ်မယ် "မသန်စွမ်း" "ဘက်ထရီ" နှင့် "ချိတ်ဆက်ထားသော" နှစ်ခုလုံး၌
နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ "အပြောင်းအလဲများကိုသိမ်းဆည်းပါ" အပြင်ထွက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်များကိုမှန်ကန်စွာလိုက်နာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ပြသနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။
များစွာသောအားဖြင့် Kindle သည်တက်ဘလက်များသို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့အခြားကိရိယာများနှင့်မတူပါ။ သူတို့ကဲ့သို့ Amazon e-reader တွင် built-in reset function တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ နာမည်ကြီးသည် ပြန်ညှိမှုမှတ်ဥာဏ်ကို ဖျက်၍ operating system ကိုတစ်ဖန်ပြန်လည်စတင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းကို software ပြဿနာများဖြေရှင်းရာတွင်သုံးလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် PC သည် Kindle ကိုအသိအမှတ်မပြုသောအခါ။
Kindle တွင်ပြန်လည်ချိန်ညှိခြင်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ ၎င်းကိုပြန်လည်စတင်ရန်နှင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များအတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။
အမြဲတမ်းကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါဝါခလုတ်ကိုစက္ကန့် ၄၀ ခန့်ဖိထားပါ (သို့မဟုတ်စက်သည်အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်သည်အထိ) ။
ဤသို့လုပ်ပြီးနောက် Kindle သည်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ မဟုတ်ရင်ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးငါတို့လုပ်ရမှာ။
PC သည် Kindle ကိုမမှတ်မိပါ။ အဲဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
အသိသာဆုံးဖြေရှင်းနည်းများသည်အမြဲအထိရောက်ဆုံးမဟုတ်ပါ။ တခါတရံမှာမင်းကထူးဆန်းတဲ့ extravaganza ကိုစမ်းကြည့်ရမယ်။ Kindle သုံးစွဲသူများစွာသည်စိတ်ပျက်အားငယ်နေသောအချိန်များတွင်ဤအရာကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမမျှော်လင့်သောအဖြေတစ်ခုကိုရရှိခဲ့သည်။
ဤအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် သင်၏ Kindle ကိုကွန်ပျူတာကဲ့သို့ကင်မရာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ e-book reader မဟုတ်ပါ။
Kindle ကို PC နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေသို့ရောက်သွားသည် လျှောမီနူး.
အဲဒီမှာမင်းဝင်ခွင့်ရမယ် "ဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်မှုများ" အကြောင်းကြားစာဘား၌ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်မှာ option ကို configure လုပ်ရန်သာဖြစ်သည် "ကင်မရာကဲ့သို့ချိတ်ဆက်ပါ".
တစ်ခါတစ်ရံမှာဒီရွေးချယ်မှုက drop-down list ထဲမှာမပါဘူး။ သို့ဆိုလျှင်၎င်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်လိမ့်မည် "စက်ပစ္စည်းဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်သိုလှောင်ခန်း".
ဒါက Kindle ကိုအသိအမှတ်မပြုတဲ့ PC ပြသနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာဘဲ။ ဒါပေမယ့်ကိစ္စအတော်များများမှာအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါဆိုဘာလို့မကြိုးစားတာလဲ။
Kindle Driver ကိုကွန်ပျူတာတွင် install လုပ်ပါ
Windows 10 တွင် Kindle Driver ကို install လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ PC သည် Kindle ကိုအသိအမှတ်မပြုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ရဖွယ်ရှိသည် Kindle မောင်းသူ Windows 10 တွင်ပြဿနာပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းအရင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါလိမ့်မည် အဝါရောင်ဖြင့်အာမေိတ်အမှတ်အသားပါသောသင်္ကေတမရ။ "Device Manager in Portable Devices" အောက်တွင်အာမေဋိတ်အမှတ်အသားပါသော MTP (သို့) USB driver တစ်ခုကိုလည်းသင်တွေ့နိုင်သည်။
ရှုံးနိမ့်မှုကနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဤယာဉ်မောင်းသူ၏ချို့ယွင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်မရ။ ဤဒုတိယကိစ္စတွင် update တစ်ခု install လုပ်ရန်လုံလောက်သည်။ ဤအရာသည်လိုက်နာရန်အဆင့်များဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး စွာငါတို့ဖွင့်လှစ် ကိရိယာမန်နေဂျာငါတို့ဘယ်ကိုသွားကြမလဲ အိတ်ဆောင်ကိရိယာများမရ။ အဲဒီမှာငါတို့ Kindle (သို့) MTP device ကိုမြင်ယောင်လိမ့်မယ်
ပြီးရင် Kindle (သို့) MTP device ပေါ်မှာ right-click နှိပ်ပြီး option ကိုရွေးပါ "ယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲကိုအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ။ "
ဒီ menu မှာဒုတိယခေါ်တဲ့ option ကိုရွေးရအောင် "ယာဉ်မောင်းဆော့ဝဲအတွက်ငါ့ကွန်ပျူတာကိုကြည့်ပါ။ "
အဲဒီမှာငါတို့ကရှည်လျားတဲ့အရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုမယ့်နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုကိုသွားလိုက်တယ် ကိရိယာမောင်းစာရင်း ငါတို့ကွန်ပျူတာအတွက် သင်တွဲဖက်သုံးနိုင်သောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်မှန်ကန်သောပုံစံကိုအာရုံစိုက်ရပါလိမ့်မည်။ ပြီးရင်ငါတို့ရွေးမယ် "MTP USB ကိရိယာ" ပြီးတော့ကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "နောက်တစ်ခု".
နောက်ဆုံးတွင်သတိပေးပြတင်းပေါက်၌ "ယာဉ်မောင်းအပ်ဒိတ်လုပ်ပါ"ကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "ဟုတ်" ဤနောက်တွင် Windows သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle အတွက်လိုက်ဖက်သော device driver ကို install လုပ်လိမ့်မည်။
ဤနည်းလမ်း ၆ ခုအပြင် အခြားစိတ်ကူးများ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Kindle နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာအကြားဆက်သွယ်မှုအမှားများကိုဖြေရှင်းရန်သုံးနိုင်သည်။ တချို့ကဥပမာပေးတယ် အခြား PC သို့ချိတ်ဆက်ပါ e-reader ၏ဘက်ထရီအားအပြည့်သွင်းပြီးနောက်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားပါ။
Kindle အသုံးပြုသူများထံမှသတင်းများအရအခြားဖြေရှင်းနည်းများသည် Caliber ပရိုဂရမ်ကိုသုံးပါ ချိတ်ဆက်ရန်သို့မဟုတ် Android Debug Bridge (ADB) ကိုဖွင့်ပါ ငါတို့အဖွဲ့မှာ ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော e-book reader သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောထောင်နှင့်တစ်ဖတ်တည်းကိုခံစားရန်မည်သည့်အရာကိုမဆို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » ကျွန်ုပ်၏ PC သည် Kindle ကိုအသိအမှတ်မပြုပါ၊ အဖြေရှာပါ